Vanhu veSerbia vane Mwoyo mikuru panguva yeCOVID inoratidza Chiono cheKushanya uye Simba
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Serbia Kuputsa Nhau » Vanhu veSerbia vane Mwoyo mikuru panguva yeCOVID inoratidza Chiono cheKushanya uye Simba
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Investments • nhau • Kuvakazve • chengetedzo • Serbia Kuputsa Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • Akasiyana Nhau
rakanyorwa Dr Snežana Štetić
Chirevo chevanhu veSerbia panguva ye COVID-19 denda ndechekuti "Tose takasimba." Kubva pakatanga denda, Serbia yakagona, inoshanda, uye yakabatana.
Serbia yaita simba rakasimba rekudzikisira denda iri mune yese nzvimbo yeBalkan
Yakaita zvakawanda pakubatana kwedunhu; kusangana kwehupfumi; uye kuyerera kwemahara kwezvinhu, vanhu, uye mari panguva yedenda.
Sangano re World Tourism Network repamusoro-soro boka revanofarira Dr. Snežana Šteti anotaurira iyi nyaya diki nezve vanhu vane moyo mikuru - vanhu veSerbia.
Kuchengetedzwa kweMisa kwevagari kwakatanga muna Ndira 2021 pamapoinzi mazana matatu muSerbia yese. Vagari vemuSerbia vakakwanisa kusarudza kubva pakutanga chaiko kwedenda kubva pamhando ina dzekudzivirira: Phajzer - BiONTeck, Sputnik V, Sinopharm, uye AstraZeneca. Nehurombo, dzimwe nyika dzeBalkan dzaive dzisina majekiseni panguva iyoyo uye dziri kuenda kukiya.
Mushure mekudzivirira kwekutanga kwevanhu vayo, Serbia iri kutanga kubatsira dzimwe nyika mudunhu mahara ne:
• Kutumira majekiseni muchimiro cherubatsiro rwechipo kunyika dziri pedyo: Northern Macedonia (majekiseni 48,000), Bosnia neHerzegovina (30,000), neMontenegro (14,000)
• Kukoka vanamuzvinabhizimusi kuti vabaiwe jekiseni muBelgrade (kuburikidza neSerbia Chamber of Commerce). Nenzira iyoyo, vanamuzvinabhizimusi vanopfuura zviuru makumi maviri vanobva kunyika dzakavakidzana vakabayiwa majekiseni.
• Serbia yakatumira chipo chemazana zana ezviyero zvemushonga wekambani Phajzer - BioNTech inopesana neCOVID-100,000 kuCzech Republic.
• Kudanwa kwakaitwa kuvagari venyika dzakavakidzana kuti vabaiwe majekiseni kuSerbia kunzvimbo dzekudzivirira dzepedyo, dzavakagamuchira.
Vagari vazhinji veSerbia vanobva kune dzimwe nyika (European Union nyika) vanouya kuSerbia kuzobayiwa majekiseni.
• Pakutanga kwedenda, Serbia yakatumirawo rubatsiro kuItaly nenzira yekufema nezvimwe zvinoshandiswa.
Serbia inozviziva izvozvo kukunda denda iri zvinogoneka kana tikabatana, ndosaka tisingafanire kufunga nezvematongerwo enyika uye geopolitics asi tibatsire munhu wese zvakanyanya.
Chii chakanyanya kukosha, zvese kuSerbia nedunhu, ndiko kutanga kwekugadzirwa kwejekiseni muSerbia. Kugadzirwa kwejekiseni reRussia Sputnik V kurwisa coronavirus kwakatanga muna Chikumi 4 kuhurumende Institute for Virology, Vaccines uye Serums "Torlak" muBelgrade. Sputnik V, inogadzirwa muSerbia, inogona kunge iri panzvimbo dzekubaiwa mumazuva gumi uye pamwe kutotanga kuita kuti Serbia ive nyika yekutanga muEurope kugadzira mushonga.
Serbia yatova kuvandudza indasitiri yayo yekufambisa neyekushanya. Vatungamiriri vakatora chinzvimbo chinotungamira mukuvakazve hurukuro yekufamba na World Tourism Network.